Nezvedu - Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co., Ltd.
Imba > Nezvedu > Nezvedu
Yakavambwa muna2008, Smida ikambani yepamusorosoro integratingautomation solution kubvunzana R & D, kugadzira, kutengesa, uyezve masosi mushure mekutengesa masevhisi. Smida akapihwa chitupa chekunyoresa chitifiketi muChinese neChirungu uye akapiwa marezenisi ekupinza kunze kwenyika zvakaringana.
Nhengo dzepakati pechikwata chedu vese vane makore anopfuura gumi ezviitiko zveindasitiri. Chinangwa chedu ndechekuve chakakosha michina yekugadzira nekusimudzira musimboti we 'â € etickushongedza dhizaini uye nehana yekugadziraâ €, uye kugadzira kukosha kwevatengi vedu vane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvehunyanzvi mabasa anoenderana nekukunda-kuhwina kubatana. Nezvese zvatinoedza, weseek yekupa vatengi vedu mabasa anoenderera.
Zvichakadaro, isu tinobata chigadzirwa chemhando sekukosha kwedu kwepamoyo. Isu tinotenda kuti mabhizimusi makuru ekugadzira anozotonga chikamu chekugadzira mune ramangwana uye kuti iwo mabhizinesi akadaro achawedzera kudzokerera kune otomatiki kuzadzisa zvavanoda zvekugadzira. Kana zvivakwa zvakanyanya uye zvakanyanya zvichishandisa michina, kudzikama kwemidziyo kunozove kwakakosha kwazvo. KuSmida, tinozvitora semutoro wedu kugadzira michina ine kugadzikana kwepamusoro uye mashandiro akareruka kuitira kuzadzikisa zvinodiwa nevatengesi.
Sezvo zvishandiso zvedu zvaedzwa, zvakatengwa muzvikamu, uye zvichishandiswa nemabhizimusi akasiyana siyana kwenguva yakareba, tine chivimbo chekuti zvinogona kuzadzisa zvaunoda zvemidziyo yemhando yepamusoro. Saka, sarudza isu, uye iwe uchawana hunyanzvi uye rugare rwepfungwa! Tiri kutarisira kunzwa kubva kwauri â € ¦